HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Dia ahoana rehefa misaraka tokoa ianareo?
Aza gaga raha malahelo be ianao mandritra ny fotoana kelikely, aorian’ilay fisarahana. Mety hitovy amin’izay tsapan’ny mpanao salamo mihitsy aza ny tsapanao. Hoy izy: “Sahiran-tsaina aho ka mitanondrika tanteraka. Ary mandehandeha amin’alahelo foana aho.”—Salamo 38:6.
Mety hisy namanao hampirisika anao hiverina hiaraka amin’ilay olona. Te hanampy anao angamba ry zareo. Mitandrema anefa! Ianao no hizaka ny vokatry ny fanapahan-kevitrao fa tsy ny namanao, na dia tia anao aza izy ireo. Aza matahotra mitana ny teninao àry, na malahelo aza ianao noho izay nitranga.
Matokia fa ho afaka ny alahelonao, rehefa mandeha ny fotoana. Mandra-pahatongan’izany, dia ireto misy zavatra azonao atao, mba hahazakanao ny alahelonao:
Resaho amin’olona azonao itokisana izay ao am-ponao.—Ohabolana 15:22.
Resaho amin’i Jehovah koa ilay izy.—Salamo 55:22.
Aza mipetrapetraka fa manaova zavatra foana.—1 Korintianina 15:58.
Aza mitokantokana!—Ohabolana 18:1.
Miaraha foana amin’ireo olona afaka mampahery anao. Aza mieritreritra zavatra mahakivy, fa zavatra tsara ihany ifantohana.—Filipianina 4:8.